कस्ले पूरा गर्न सक्छ मेरो चाहना ? कस्ले पूरा गर्न सक्छ मेरो चाहना ? पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् - Samachar Post Dainik
कस्ले पूरा गर्न सक्छ मेरो चाहना ? कस्ले पूरा गर्न सक्छ मेरो चाहना ? पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
कस्ले पूरा गर्न सक्छ मेरो चाहना ?
पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
अध्ययनअध्ययन अनुसार महि लाहरुले केही कुरा सधै गोप् नै राख्ने गरेको पाइएको छ । ती के के हुन धेरलाइ थाहा हुदैन । गप्य कुराको नजिकका साथी र श्रीम नलाइ समेत थाहा हुदैन ।एक महि लाले अर्की महि लाको डाहा गर्दछन् तर पुरुषलाई यो थाहा हुदैनकी एक महि ला ले अर्की महि लालाई मन पराउछन् ।
उनीहरुले अर्की महिलाको सौन्दर्य स्टाइललाई शरिरको फिगरको पनि डाहा गर्ने अध्यनले देखाएको छ । महिलाहरुले आफनो पुर्व प्रे मीप्रति चासो राख्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
महिलाले उनको पहिलो ब्याइफे ण्डसंग कुन के टीसंग अयर चलेको छ । यो केटी आएपछि केटाको जीवनमा के परिवर्तन हुदैछ भने चियो चर्चा गर्छन् ।पोर् फिल् प्रति चासो : महिलाहरु पोर् फिल् हेर्न मन पराउने गरेको अध्यनले देखाएको छ । उनीहरुले लुकी लुकी पो-र्फिल्हे र्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
आफनो शरिरलाई माया : महिलाहरु आफनो शरिरलाई देखाउन चाहन्छन् ।आफनो शरिरलाई नै मन पराउने गर्दछन् ।उनीहरुले पु रुषहरुलाइ आफनो शरिर देखाएर आ र्कषित गर्छन् ।
प्राय महिलाहरु एकै हुँदा पनि मस्ती गर्न मन पराउने गर्दछन् । महिलाहरु एक्लै भएको समयमा ऐनाको सामुन्ने नाच्ने , बिभिन्न पोज दिएर सेल्फी फोटो खिच्ने , मेकअफ गरेर मस्ती गर्ने गर्छन।
पुरुषको डाहा : धेरै महिलाले पुरुषप्रति डाहा गर्ने गरेका हुन्छन् किनभने पुरुषहरु महि / नावारी हुदैन , पुरुषलाई नै महिनासम्म बच्च कोमा राख्नु पर्दैन , बच्चा जन्मानु पर्दैन, त्यस बखत हुने पडा खप्नु पर्दैन जस्ता क्रियाकलापकले महिलाहरु पुरुषको डाहा गर्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
पुरुष प्रति जासुस: महिलाहरु प्राय आफनो जीवन साथीको हरेक कुरामा जासुस गरिरहेका हुन्छन् । पुरुषको धेरै कुरा थाहा पाउनका लागी गोप्य रुपमा जासुस गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रकाशित मिति २९ भाद्र २०७८, मंगलवार १३:३६